Chii chinonzi Zoom uye chinoshanda sei? Uyezve matipi uye manomano
Kana iwe uchishanda uchibva kumba, pamwe wakambonzwa nezve Zoom, imwe yekutungamira vhidhiyo musangano musangano software pamusika.
Izvo zvinokutendera iwe kuti ugone kudyidzana nevashandi-navo kana vashandirwi kana uri-munhu misangano isingaite. Izvi zvinoita kuti telecommuting iite senge yakawanda sevanhu, sezvo ichikubatsira kuti unzwe wakabatana. Zoom rave chishandiso chakakosha kune zvidiki-, zviri pakati-, uye zvakakura-zvikwata zvikwata zvinoda kuramba zvichikurukura nekuenderera mberi nekufashukira kwezuva nezuva nekukanganisa kushoma - pamwe nekuve anodikanwa akasimba nevanhu.
Chii chinonzi Google Kusangana uye Chat uye vanoshanda sei?
Chii chinonzi Microsoft Teams? Iyo yekukurukura, yekugovana uye yekudyidzana iyo chikamu cheMicrosoft 365
Chii chinonzi Zoom?
Zoom is Cloud-based video conferencing service yamunogona kushandisa kuti munosangana nevamwe - kungave vhidhiyo kana odhiyo-chete kana vaviri, zvese izvi uchiita mharidzo dziripo - uye zvinokutendera kurekodha zvikamu izvozvo kuti zvionekwe mushure. Kupfuura hafu yemakambani Fortune 500 anonzi akamboshandisa Zoom muna 2019.
Kana vanhu vachitaura nezve Zoom, iwe unowanzo kunzwa mazwi anotevera: Zoom Musangano uye Zoom Kamuri. Musangano weZoom unoreva musangano wevhidhiyo musangano wakaitirwa uchishandisa Zoom. Iwe unogona kujoina iyi misangano kuburikidza ne Webcam kana runhare. Zvichakadaro, Zoom Kamuri ndiyo yemukati Hardware setup iyo inoita kuti makambani kuronga uye kutanga Zoom Misangano kubva kumakamuri avo emusangano.
Zoom Rooms inoda yekuwedzera kunyorera pamusoro peZoom kunyoreswa uye ndiyo yakanaka mhinduro kumakambani makuru.
Mapeji ewebhu akanakisisa: Kamera yepamusoro yekufona kwevhidhiyo
Zoom maficha akakosha
Heano maitiro eZoom epakati:
Misangano yemumwe-mumwe: Bata unlimited-one-on-one misangano kunyange nehurongwa hwemahara.
Misangano yevhidhiyo yeboka: Ita vanosvika mazana mashanu vatori vechikamu (kana iwe ukatenga iwo "musangano mukuru" wekuwedzera). Iyo yemahara chirongwa, zvakadaro, inokubvumira iwe kutora vhidhiyo makongiresi anosvika makumi mana emaminetsi uye anosvika zana vatori vechikamu.
Screen kugovana: Sangana-mumwe-pane-kana nemapoka akakura uye ugovane skrini yako navo kuti vaone izvo zvaunoona.
Zoom inoshanda sei?
Sarudza chirongwa chako
Zoom inobvumira imwe-kune-imwe chat chat iyo inogona kukura kuva mafoni emapoka, zvikamu zvekudzidziswa uye webinars yevateereri vekunze uye ekunze, nemisangano yemavhidhiyo epasirese kusvika kune vatori vechikamu vanosvika chiuru uye vakawanda sevheti makumi mana nemaviri pachiratidzo. Iyo yemahara tier inobvumira isina kuganhurirwa imwe-pa-imwe misangano asi inodzikamisa zvikamu zveboka kune makumi mana emaminetsi uye zana vatori vechikamu. Zvirongwa zvakabhadharwa zvinotanga pamadhora gumi nemashanu pamwedzi pamukwende.
Zoom inopa mana emitengo (kusanganisa neZoom Room kunyoreswa):
Zoom Yemahara: Iyi tier ndeye mahara. Iwe unogona kubata isingaverengeki nhamba yemisangano. Misangano yeboka nevazhinji vatori vechikamu yakabatirwa pamaminetsi makumi mana pakureba, uye misangano haigoni kurekodwa.
Nekure Pro: Iyi tier inodhura $ 14.99 / £ 11.99 pamwedzi uye musangano wemusangano. Iyo inobvumira magedhi kugadzira yega ID emisangano yekudzokorora Zoom Misangano, uye inobvumidza kurekodha musangano mugore kana chishandiso chako, asi inokokorodza kuboka kwemisangano yeboka kumaawa makumi maviri nemana.
Zoom Bhizinesi: Iyi tier inodhura $ 19.99 / £ 15.99 pamwedzi uye musangano wekugamuchira (gumi zvishoma). Iyo inokutendera kuti uite brand Zoom misangano nezvisina basa URLs uye yekambani kushambadzira, uye inopa zvinyorwa zve Zoom musangano zvakanyorwa mugore, pamwe nekuzvipira kwevatengi.
Zoom Enterprise: Iyi tier inodhura $ 19.99 / £ 15.99 pamwedzi uye pamisangano yekumusangano (100 yakaderera) uye inoitirwa mabhizinesi ane vashandi vane chiuru. Iyo inopa isina muganho wegore rekurekodha, maneja wekubudirira kwevatengi, uye zvidzikiso pawebhusaiti uye Zoom Rooms.
Inesarudzo - Room Rooms: Kana iwe uchida kumisikidza Zoom Rooms, iwe unogona kusaina kusaina kwemazuva makumi matatu kuyedzwa, mushure mezvo Zoom Rooms inoda imwe $ 30 / £ 49 pamwedzi uye kamuri kunyoreswa, nepo webinars ichishandisa Zoom inodhura $ 39 / £ 40 pamwedzi uye host.
Zoom app kurodha pasi
Iyo desktop desktop inowanikwa Windows uye macOS, nepo mobile software iripo Android uye iOS.
Mapurogiramu ese anorega ujoinise musangano usina kusaina, asi zvakare ita kuti usaini uchishandisa Zoom account, Google, Facebook, kana SSO. Kubva ipapo, iwe unogona kutanga musangano, kubatana musangano, kugovera skrini yako muZoom Kamuri nekupinda ID ID, tanga Zoom Misangano, simudza / simudza mic yako, tanga / mira vhidhiyo, koka vamwe kumusangano, shandura yako Screen zita, ita-musangano musangano, uye tanga kurekodha gore.
Kana iwe uri mushandisi wekhompyuter, iwe zvakare unokwanisa kutanga rekodhi yemunharaunda, kugadzira mapolitifomu, kutepfenyura yako Facebook rarama pa Facebook, nezvimwe. Mune mamwe mazwi, iyo desktop desktop inoratidzwa zvizere, kunyange, kana iwe uri wemahara mushandisi, iwe unogona kuwana mamirioni akawanda kubva pane ye mobile app.
Zvakare pamwe nedzimwe dzakasiyana Zoom app kurodha pasi, zvinokwanisika kushandisa Zoom nedzimwe nzira. Semuenzaniso, pane Zoom Outlook plugin iyo yakagadzirirwa kushanda zvakananga mune yako Microsoft Outlook mutengi kana se Wedzera-in yeOutlook pawebhu. Iyi yekubuda plug inodonhedza bhatani reZoom mune chairo chiyero cheOtalog chishandiso uye chinokutendera kuti utange kana kuronga musangano weZoom uchinyoreka
Zoom browser yekuwedzera
Chimwe chishandiso chekukurumidza kutanga kana kuronga musangano weZoom chinouya muchimiro chewedzerwa yeyako browser yaunoda. Kune a Zoom Chrome kuwedzera uye Zoom Firefox kuwedzera-pa inorega iwe kuronga musangano weZoom kuburikidza neGoogle Calendar. Bhatani riri nyore pabhatani reZoom uye unogona kutanga musangano kana kuronga rimwe ramangwana neruzivo rwese pamusangano urwo rwunotumirwa neGoogle Khalenda kuti zviite nyore kuti vatori vechikamu vapinde.
Uchishandisa Zoom mune yako browser
Izvo zvine hunyengeri kujoina musangano weZoom mubrowser yako usingashandise iyo app. Izvo zvinogoneka zvakadaro. Semuenzaniso, unogona kujoina musangano zvakananga uchishandisa Zoom webhu mutengi chinongedzo chinotaridzika chakadai— zoom.us/wc/join/your-meeting-id.
Mamwe mabhodhi akangwara akashandawo yekuwedzera browser kuti ikubvumidze kujoina musangano weZoom wakanangana nebrowser yako pasina kunetseka kweapp. Izvi zvakanaka kana iwe uri pane yakachengeteka basa laptop iyo isingatenderi iwe kuisa chero maapplication semuenzaniso.
Zvinondiuraya kuti Zoom nemaune inovanza chinongedzo che "kujoina kubva kubrowser yako", saka heino diki (makumi maviri mutsara) browser rekuwedzera iro rinodzosera pachena zviyero zveZoom kushandisa yavo webhu mutengi: https://t.co/ZeYmmS2R2A https://t.co/50f6ak4i9x
- Arkadiy Tetelman (@arkadiyt) March 22, 2020
Kuwedzerwa uku kuri kuwanikwa ikozvino Chrome uye Firefox. Kunyangwe zvichikosha kucherechedza kuti haina kugadzirwa zviri pamutemo neZoom.
Zoom paTV yako
Izvo chaizvo zvinokwanisika kuti Zoom ishande paTV yako kuti ugone kufona yevhidhiyo pachiratidziri chikuru. Isu takanyora yakadzama gwara pane iyo nzira dzakasiyana-siyana dzaunogona kuwana Zoom paTV yako izvo zvakakodzera kuongorora.
Ndeupi musiyano uripo pakati peyakabhadharwa uye yemahara Zoom?
Kune misiyano shoma pakati pezvakabhadharwa uye zvemahara Zoom zvirongwa zvakakodzera kucherechedza.
Unogona kudhawunirodha Zoom app pakombuta yako kana parunhare uye wobatanidza chero musangano neakapihwa musangano ID. Unogona kusarudza kuregedza odhiyo kana vhidhiyo usati wabatana, futi. Iwe unogona zvakare kugadzira yako yemahara Zoom account, senge nekubatanidza yako Google account, uye kubva ipapo iwe unogona kugadzira musangano mutsva, kuronga imwe, kubatana musangano, kugovana skrini, kuwedzera vanofambidzana, zvichingodaro.
Ingoisa mupfungwa iwe unogona kungoiswa muZoom pane imwe komputa, piritsi imwe, uye foni imwe panguva. Kana iwe ukasaina kune chimwe chigadzirwa uchinge uchikanda mune imwe mudziyo yeiyo mhando, Zoom yakati iwe uchaiswa kunze kwega pachishandiso chekutanga.
Unogona kusaina uye kurodha Zoom mukombuta yako uchishandisa yako email basa kana yako system maneja ine Pro, Bhizinesi, kana Enterprise account. Uchazoda kuyananisa Zoom kukendari yako kuitira kuti ugone kuronga Zoom misangano uye kukoka vari kure kutora chikamu kuti vabatane.
Kana iwe uri kumisikidza Zoom Kamuri, iwe uchada komputa kuti sync uye kumhanya Zoom Misangano uye piritsi yevanopinda kuzarura Zoom Misangano. Iwe zvakare uchada mic, kamera, uye mutauri, ingangoita imwechete HDTV monitors yekuratidza vatori vechikamu musangano, uye HDMI tambo yekugovera zvigadzirwa zvemakomputa pane kuratidzwa, pamwe netambo yeintaneti yekubatanidza kwako.
Iwe zvakare unofanirwa kudhanilodha "Zoom Rooms for Conference Room" pane mukamuri yekamuri uye "Zoom Kamuri Yekudzora" yepiritsi iri musangano wemusangano. Iwe unogona zvino kusimbisa iwo makamuri kukendari yekambani yako yakagovaniswa kuitira kuti vashandi vaone kuti ndedzipi dzimba dzemusangano dzinowanikwa.
Zoom nyaya dzekuchengetedza uye kudzokorora
Munguva pfupi yapfuura pakave nehuwandu hwekunetseka kwakasimudzwa nezve Zoom zvese maererano nekuchengetedza uye matambudziko nevashanyi vasingadiwe vanozivikanwa se Zoombombers.
Iyo kambani yaita akati wandei kufamba kurwisa idzi nyaya uye kuvimbisa vashandisi nezve kukosha kwekuchengetedza uye kuvanzika. Izvi zvinosanganisira zvinhu zvakapusa sekubvisa ID yemusangano kubva kubha remusoro wekufona saka kana vashandisi vakagovana screenshots pamusangano musangano hauna kuratidzwa nekushungurudzwa mune ramangwana.
Iyo kambani yakaburitsa huwandu hwekudzokorodza kuapp kuti ikwidze ziviso dzekuchengetedza.
Chii chinonzi Zoombombers?
Kuwedzera kwekukurumbira kweZoom kunofanirwa kutungamira sevhisi yekushungurudzwa neinternet troll uye vanhu vane yakawandisa nguva pamaoko avo. Vamwe vanhu vanga vachivhima veruzhinji uye vasina kuchengetedzeka Zoom misangano uye vachizvibvumira kupinda mukati, vozo "bhomba" vamwe vanhu parunhare nemavhidhiyo emifananidzo, zvinonyadzisira uye nezvimwe zvisina kukodzera.
Takanyora chinyorwa pa kumira kweZoombombing kwechinguva kudzoka uye kune nzira dzakasiyana siyana dzaunogona kudzivirira izvi kuti zvisaitike, kusanganisira kuchengetedza mafoni ako, kudzivirira kugoverwa kwemuchina uye kunyangwe kuremadza vhidhiyo. Chikwata chiri kuseri kweZoom chiri kuitawo dzimwe nguva kuvandudza kuchengetedza mafoni ako uye kuchengetedza.
Default kuchengetedzwa kwekuchengetedza
Zoom yakagadziriswa shanduko dzinoverengeka dzekuchengetedza kubatsira kusimbisa vashandisi. Imwe yeizvi yakave chiri chinodikanwa che password sewe default yemisangano ye Zoom. Izvi, zvakabatanidzwa makamuri ekumirira, inova nechokwadi chekuti vanhu chete avo vakokwa kuzodanwa ndivo vanobvumirwa mukati.
Rimwe danho rekuona kuti mafoni akachengeteka uye akachengeteka kumunhu wese.
Zoom kuchengetedza zvishandiso
Zoom yaitawo kuti zvive nyore kubata uye kuchengetedza yako misangano kana iri kuitika. Kune huwandu hwe zvishandiso zvekuchengetedza iwe unogona ikozvino kuwana nemaviri ekuchekera kusanganisira kugona kukiya musangano kana zvatanga saka hapana vanhu vatsva vanogona kujoina, bvisa vatori vechikamu parunhare, kuchinjisa vatori vechikamu uye kuvhiringidza vega kutaura navo.
Kuti uwane zvishandiso zvekuchengetedza Zoom, unogona kungobaya bhatani bhatani rinowoneka pahwindo kana iko kurira kuri kuitika kana kuturika pamusoro pemubatanidzwa kuti ataurirane navo zvakananga - kuvabvisa kubva kufona semuenzaniso.
Kuzivisa vamwe vatori vechikamu
Izvozvi zvave kugona kumhan'arira vatori vechikamu parunhare vasina kugamuchirwa kana vari kukonzera dambudziko. Zvakare nekuvabvisa kubva kufona, iwe unogona ikozvino kutumira mushumo kuZoom Trust uye timu Yekuchengetedza kubata zvisirizvo zveiyo system. Izvi zvinobatsira kuvadzivirira kubva kusevhisi mune ramangwana uye kukanganisa dzimwe mafoni zvakare.
Kuti uite kudaro, tinya bhatani rekuchengetedza pamusangano wobva wadzvanya ripoti.
Zoom matipi uye manomano
Gadzira musangano unodzokororwa
Zoom inoita kuti iwe ugadzire musangano unodzokororwa. Iwe unogona kuseta zvigadziro zvekufona zvaunoda kamwe chete uye kuita kuti vagare imomo nguva imwe neimwe yaunorangana kusangana, uye unogona kubatanidza mafoni uchishandisa iyo yakafanana URL nguva imwe neimwe. MuZoom mobile app, ingo pinda mukati, pinda purogiramu, tora iyo Kudzokorora sarudzo, uye sarudza kudzokorora. Kuti uwane rumwe ruzivo nezvekurongedza misangano yakawanda uye ese emisangano musangano, ona Zoom's FAQ pane kuronga misangano.
Maitiro ekurekodha Zoom unodaidza sevhidhiyo
Zoom inoita kuti utore mafoni semavhidhiyo. Iwe unoda mvumo yekuzviita zvakadaro. Iye musangano musangano anofanirwa kugonesa marekodhi mune zvigadziriso. Izvo zvakakosha kutarisa ako account marongero kuve nechokwadi chekuti kurekodha kunogoneswa usati watanga.
Pinda mu Zoom account yako
Dzvanya kuti uone Account Settings/ Zvirongwa zvekusangana
Enda kune Kurekodha tebhu uye tinya kuti ugone kugonesa vhidhiyo
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Zoom admins inogona kumisikidza kurekodha kune wese munhu, kune vashandisi kana mapoka. Pane zvakawanda nhungamiro pakurekodha zvirongwa pano.
Kuti urekodze musangano weZoom, iwe unofanirwa kusarudza kuti ushandise iyo yemunharaunda kana Cloud sarudzo.
Yemunharaunda zvinoreva kuti unochengeta iyo vhidhiyo faira pachako pakombuta yako kana mune imwe nzvimbo yekuchengetera. Iine Cloud, iri revanyori vakabhadharwa chete, Zoom inochengetera iwe vhidhiyo mune yayo gore rekuchengetedza. Asi, kuti utore mavhidhiyo, unoda Zoom pane macOS, Windows, kana Linux. Paunorekodha musangano uye wosarudza Record to the Cloud, iyo vhidhiyo, odhiyo, uye meseji yekutaura inonyorwa muZoom gore.
Kana Zoom yekufona painotanga iwe unofanirwa kuona sarudzo yekunyora pasi pechiratidziro. Kubaya izvo zvinobva zvaita kuti ubure rekodhi kana kuti mugore.
Kana iwe usingaone sarudzo yekurekodha, tarisa masetingi ako muwebhu webhu (pasi peMusangano Wangu Zvirongwa) kana kuti account yako admin igone. Iwo ekurekodha mafaera anogona kutorwa pasi kumakomputa kana kuyeredzwa kubva kubhurawuza.
Panguva yemusangano, iwe unogona zvakare kuona kuti ndevapi vatori vekurekodha musangano uye avo vari pamusangano vanozotaurwazve kana musangano uchinge wanyorwa. Kana iyo yekufona yapfuura Zoom inozochinja otomatiki kuva inoshandisika MP4 vhidhiyo faira.
Kurekodha Zoom misangano pane mobile
Izvo zvinokwanisika kurekodha Zoom misangano uye kufona pane mobile zvakare. Nekudaro, izvi zvinoitwa kuburikidza zvinyorwa zvegore saka unoda kubhadharwa Zoom nhengo kuti ushandise chinhu ichi. Izvo zvakare zvakakosha kuti uzive kuti gore rekuchengetedza rakashomeka, saka chenjera kuti mangani mamisangano iwe aunorekodha iwe uchishandisa iyo nharembozha.
Kuti kurekodha Zoom kufona parunhare tevera nhanho idzi:
Vhura iyo Zoom app pane yako mobile
Dzvanya kubatana kana kutanga musangano
Dzvanya menyu matatu matatu matatu pane pasi kurudyi rwekrini
Dzvanya "Rekodha kune iro gore" kana "rekodhi"
Iwe unozobva waona yekurekodha icon uye kugona kumbomira kana kumira kurekodha
Kana iko kufona kwapera iwe unowana iko kutsikisa mu "My Recordings" chikamu cheZoom saiti
Zoom inochengetedza kupi marekodhi?
Paunenge uchinyora munharaunda, Zoom kufona zvinyorwa zvinochengetwa pane Zoom folda pane yako PC kana Mac. Izvi zvinogona kuwanikwa munzvimbo idzi:
PC: C: UsersUser NameDocumentsZoom
Mac: / Vashandisi / Vashandisi zita / Zvinyorwa / Zoom
Iwe unogona kuwana nyore nyore Zoom zvinyorwa nekuvhura Zoom app uye kufamba uchienda kumisangano. Kamwe ikoko uchaona "yakanyorwa" Tab apo unogona kusarudza musangano zvaunoda ipapo kana kuridza zvakarekodhwa kana kurivhura.
Kuti uchengete gore rako reZoom musangano rekodhi pinda muakaunti yako uye uende ku Zvangu Zvakarekodhwa peji.
Tsvaga zvakawanda pamusoro Zoom rekodhi pano.
Maitiro ekuvandudza yako yemakrofoni kunaka neAI
Kana iwe usina hofisi yakakwana ine rugare yekushanda kubva ipapo unogona kuwana zvinhu zvine ruzha uye zvishoma pane nyanzvi kune yako mafoni. Nvidia ine mhinduro ine AI-powered chidimbu che software iyo inogona kubvisa kumashure ruzha kubva kunhare dzako.
Iwe unofanirwa kunge uchimhanya Windows 10 uye uve naNvidia GeForce RTX kana Quadro RTX mifananidzo yemakadhi asi kana ukaruta iwo mabhokisi aunogona kushandisa Nvidia RTX Izwi kubvisa ruzha rwusingadiwe kubva mumakrofoni yako.
Isu takanyora rakadzama gwara rekuti ungaita sei seta RTX Izwi pano, asi zvakanyanya kukosha iwe unongofanirwa kudhawunirodha software, wozoiisa senge yako yekutanga yekuisa uye yekuburitsa mudziyo mukati me App
Paunenge iwe waita izvo, iwe unofanirwa kubva wawana mhando yemakrofoni yako yakavandudzwa uye yako misangano yakanyanya kuve nyanzvi.
Kana iwe uchida kuita jazz zvinhu kumusoro zvishoma kana usingade vamwe vanhu paZoom kufona vachiona zvakashata zvakashata zveimba yako saka pane nhau dzakanaka sezvo Zoom inopa chaiyo mamiriro. Aya ndiwo mamiriro ekumashure ekufona kwako anosanganisira zvinhu senzvimbo, maguta macape uye maonero egungwa-padivi zvakare.
Yakanakisa Zoom kumashure: Inonakidza chaiwo masosi e Zoom misangano
Ne Zoom chaiyo kumashure, iwe unogona zvakare kuisa mufananidzo wechinhu chero chaunoda kugadzirisa yako kumashure. Inowanikwa kune ese iPhone uye desktops
Mashandisiro aungaita mamiriro epamberi pane desktop
Zviri nyore nyore kutanga neZoom chaiyo kumashure. PaMac kana PC, semuenzaniso, ingo vhura yako Zoom mutengi, tinya pane "Setup" icon pakona, uye sarudza "Virtual Background" mune yepadyo menyu.
Zoom inopa mashoma mashoma mashure. Dzvanya pane yaungade kushandisa. Kana iwe uchida yako yemashure, tinya pane yekuwedzera chiratidzo kumusoro uye kuruboshwe kwemuenzaniso mamashure, sarudza mufananidzo kubva pakombuta yako, uye wobva wawedzera.
Iwe unogona zvakare kuwedzera yemberi kumashure mumusangano. Mune Zoom yako mutengi, tinya museve padivi pechiratidzo vhidhiyo kuruboshwe, sarudza "Sarudza chaiyo kumashure ...", uye iwe uchaona yakafanana Virtual Background peji.
Iyo kambani inokurudzira kushandisa skrini yakasvibira uye yakanaka webcam kuwana mhedzisiro yakanaka, asi zvinokwanisika kushandisa isingaiti isina girazi rakasvibira zvakare.
Mashandisiro ekushandisa masendimita paruoko app
Iwe unogona zvakare kushandisa Zoom chaiwo kumashure pane lokusebenza zvakare.
Pinda kuaccount yako uye kujoina musangano kuburikidza nefoni yako. Wobva wadzvanya madota matatu pazasi pekona uye tinya iyo "zvimwe" menyu. Wobva wadzvanya "virtual background" uye sarudza iyo kumashure iwe yaunoda kushandisa.
Bata chitarisiko changu
Zvakare pamwe neakangoita mamiriro, Zoom inopa kugona kuvandudza ako maratidziro iwe paunenge uri parunhare. Pane chimwe chinhu chinonzi "Bata Up Chitarisiko Changu" icho chinobatsira kana usati wambogadzirirwa caffeine yako yezuva nezuva kana uri kunetseka nehupenyu muhofisi yekumba.
Bata Kutaridzika Kwangu inoshandisa svina kuchenesa mitsara yakanaka uye zvakagadzirirwa kutaridzika chaizvo zvakasikwa. Kuti ushandise Kubata Kuonekwa Kwangu, enda kuZvirongwa, uye pasi peVhidhiyo tebhu, tarisa bhokisi riri padyo neKubata kumusoro.
Zvakare pamwe nekurekodha Zoom misangano, iwe unogona zvakare zvinyorese ruzha rwemusangano unorekodha kune gore. Uye, semubati musangano, unogona kugadzirisa zvinyorwa zvako, wongorora zvinyorwa zvemashoko akakosha kuti uwane vhidhiyo panguva iyoyo, uye ugovane rekodhi.
Kugonesa iyo Audio Transcript ficha yekushandisa yako pachako, saina mu Zoom web portal uye famba kuenda kuMisangano yangu Zvimisikidzwa, woenda kuC Cloud kurekodha sarudzo pane Rekodhi tabhu, uye ona kuti iko kuiswa kunogoneka. Sarudza Turn On, kana zvichidikanwa. Kana iyo sarudzo yakavezwa kunze, iyo yakavharwa kune imwe kana Boka kana account level, uye iwe uchafanirwa kubata yako Zoom admin.
49-munhu gallery gallery
Neyekutarisa kwegalari, iwe unoona kusvika 49 vevatori vechikamu musangano, pane izvo zvisingagumi 25, zvinoenderana nesimba rako.
Iine Zoom mobile app pane Android uye iOS, unogona kutanga kana kujoina musangano. Nekusagadzikana, iyo Zoom mobile app inoratidza inoshanda yemutauri. Kana mumwe kana vazhinji vevatori vechikamu vakapinda musangano, uchaona vhidhiyo vhidhiyo mukona-kurudyi kona. Iwe unogona kutarisa kusvika kuvadzidzi vevatori vechikamu panguva imwe chete.
Kana iwe uchida kuona vanhu makumi mana nevapfumbamwe, iwe uchada Zoom desktop mutengi we macOS kana Windows. Paunenge uchinge uine iyo desktop desktop yaiswa pakombuta yako, unofanirwa kuenda kuZvirongwa uye tinya Vhidhiyo kuratidza iyo vhidhiyo yekumisikidza peji. Wobva wagonesa sarudzo "Ratidza kusvika makumi mana nevatanhatu pachiratidziri paGallari Yekutarisa".
Zoom screen kugovera uye kushandisa kumbomira share
Wakanga uchiziva here kuti iwe haugone kungogovanisa skrini yako (smartphone uye desktop) asi zvakare kumbomira yako yekugovera skrini? Ingo pfuuridzira imbomira Kugovana paunenge usingade kuti vatori vechikamu vemisangano vakuone iwe uchitenderera pane yako mharidzo. Dzidza zvakawanda pano.
Goverana uye kutsamwisa parunhare
Unogona kugovana mafaira zvakananga kubva pafoni yako uchiri mumusangano uye kushandisa chena kuchena pafoni yako nekunyora zvaunotaura nemumwe wako. Kuti unzorodze uchitarisa mumwe munhu akabaiwa skrini, sarudza Ongorora Sarudzo kubva kumusoro kwewindo reZoom, wobva wasarudza Annotate. Bhandi rekushandisa rinozoonekwa uine zvese zvaungasarudza kuita zvinosetsa - senge rugwaro, dhizaini, museve, zvichingodaro.
Zoom keyboard mapfupi
Izvo zvinokwanisika kushandisa akasiyana mapfupi makiyi panguva yeZoom misangano kuwana maficha kana kushandura marongero nyore Izvi zvinosanganisira zvinhu zvakawanda asi zvatinofarira nde:
Alt + A kana Command (⌘) + Shift + A: Ridza / tumbudza ruzha
Alt + M kana Command (⌘) + Kudzora + M: Ridza / tambisa un audio yemunhu wese kunze kwemutambi
Alt + S kana Command (⌘) + Kudzora + S: Kutanga kugovana skrini
Alt + R kana Command (⌘) + Shift + RKutanga / kumisa kurekodha vemunharaunda
Alt + C kana Command (⌘) + Shift + C: Kutanga / kumisa makore kurekodha
Alt + P kana Command (⌘) + Shift + P: Kumbomira kana kutangazve kurekodha
Alt + F1 kana Command (⌘) + Shift + W: Chinja pakutarira kwemutauri ari kushamisika mumusangano wevhidhiyo
Iyo Yakanakisisa Yemahara uye Paid Musangano wekufona Services
Sei Kurekodha Skype Kudana pa Windows, Mac, iPhone uye Android
Maitiro Ekusimudza Ruoko muMusangano weZoom
Google Sangana vs. Zoom: Ndeipi musangano wekusangana uri nani kwauri?
Chii chinonzi Zoom bhomba? Maitiro ekumisa troll kubva pakupaza yako vhidhiyo musangano
7 Dzakanakisa Online Webinar Zvishandiso zveVashandi Remote & Zoom Alternatives
Yakazara runyorwa rwezvinhu zvitsva zvakawedzerwa kuMicrosoft Teams munaNovember
Tora HEVC (H.265) Vhidhiyo Yekuwedzera codec Yemahara Windows 10
Maitiro Ekugonesa Windows Mufananidzo Wakaona Mu Windows 11
GTA 5 Cheats PS4 Uye Zvikamu Zvose Zvekare